‘बेचैन, रिसाहा, र असन्तुष्ट’ : नेपालचर्च डट कम NepalChurch.com
‘बेचैन, रिसाहा, र असन्तुष्ट’
[0] October 11, 2016	| Sarju Rijal
मंगलवार, अक्टोबर ११, असोज २५
‘मलाई त्यही पानी दिनुहोस् र म कहिल्यै तिर्खाउनेछैनँ ।’ —यूहन्ना ४:१५
मादक पदार्थ पिउने लत लागेका व्यक्तिहरूलाई त्यो लतबाट छुटकारा पाउन सहायता गर्ने संस्था ‘अल्कोहोलिक एनोनिमस’ का बाह्र चरणको कार्यक्रममा, यस्ता छुटकारा चाहनेहरूलाई के सिकाइन्छ भने उनीहरू ‘बेचैन, रिसाहा, र असन्तुष्ट’ भएभने उनीहरू आफूलाई मन पर्ने लागु औषधमा फर्केर जाने खतरामा रहन्छन् । अनि त्यो कुनै समाधान होइन ।
किन ? किनकि हामी प्रत्येकभित्र परमेश्वरको आकारको रिक्तता छ जसलाई उहाँले मात्र भर्न सक्नुहुन्छ । हामी कतिपयले त्यो रिक्ततालाई मानवीय सम्बन्धहरूद्वारा भर्न प्रयास गर्छौं । येशूले एउटी स्त्रीलाई भेट्नुभयो जसको पाँच पटक सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको थियो, र जो अब अर्कै एउटा पुरुषसँग बस्थिन् । उहाँसँग तिनको वार्तालाप यसरी अघि बढ्योः ‘येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, “यो पानी पिउने प्रत्येक फेरि तिर्खाउनेछ, तर जस–जसले मैले दिने पानी पिउँछ, त्यो कहिल्यै तिर्खाउनेछैन । जुन पानी म त्यसलाई दिनेछु, त्यो त्यसमा अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ ।” त्यस स्त्रीले उहाँलाई भनी, “हजूर, मलाई त्यही पानी दिनुहोस्, र म तिर्खाउनेछैनँ, र यहाँ पानी भर्न आइरहनुपर्दैन”’ (पद १३–१५) । तपाईंको शरीर भोकाउँदा र तिर्खाउँदा यसले तपाईंलाई त्यो कुरा थाहा दिन्छ । तपाईंको आत्माले पनि त्यसै गर्छ, अनि तपाईं बुद्धिमान् हुनुहुन्छ भने तपाईंले त्यो सुन्नुहुनेछ । एकमात्र ‘सुरक्षित’ लत भनेको सम्पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा समर्पित हुनु र उहाँमा भर पर्नु हो ! हामी सबैमा हाम्रो आत्मालाई के चाहिन्छ भन्दा पनि हाम्रो शरीरले के चाहना गर्छ त्यसप्रति प्रतिउत्तर जनाउने प्रवृत्ति हुन्छ ।
यसैले हामी काम, यौन, र मनोरञ्जन जस्ता कुराहरूतर्फ फर्कन्छौँ। अब त हामीले अर्को लत पनि थपेका छौँ— इन्टरनेट । मनोवैज्ञानिकहरूले यथार्थमै ‘इन्टरनेटको लत’ लागेका मानिसहरूको उपचार गरिरहेकाछन् । साँच्चै ! दाऊद राजासँग यी सबै थोक थिएः शक्ति, प्रसिद्धि, आनन्द, र सम्पत्ति । तर यी कुराले उनलाई रित्तो बनाएर छोडे, यसैकारण उनले लेखे, ‘जसरी हरिणले खोलाका पानीको तृष्णा गर्दछ, त्यसरी नै हे परमेश्वर मेरो प्राणले तपाईंको तृष्णा गर्दछ’ (भजन ४२:१) । तपाईं कहिले ‘बेचैन, रिसाहा, र असन्तुष्ट’ बन्नुहुन्छ पहिचान गर्नुहोस् अनि परमेश्वरकहाँ जानुहोस् ।
आत्मिक भोजनः प्रस्थान २५–२७, यूहन्ना ४:१३–१६, भजन ८९:३८–५२, हितोपदेश २६:२३–२६
« ‘फर्कनु … सेवा गर्नु … प्रतीक्षा गर्नु’
बिहानै गर्नुपर्ने पहिलो काम (१) »